NICKEL (II) DHEXMARKA DIBENZOYLMETHANE IYO N-BENZYLETHYLENEDIAMINE, IYO SHAQAALAHA MONOBASE
N-Benzylethylenediamine iyo dibenzoylmethane (1,3-diphenyl-1,3-propanedione) waxay ku urursan yihiin saamiga stoichiometric 1: 1 iyadoo falcelin toos ah la siinayo Schiff monobase; si kastaba ha ahaatee, falcelintani waxay ku dhacdaa wax -soo -saar aad u weyn oo kaliya marka la eego xaalado aad u gaar ah sababtoo ah falcelinta hooseysa ee ...
Wax -soo -saarka furfurnaanta iyo xulashada ayaa la kordhiyaa iyadoo laga falcelinayo 1 ilaa 10 boqolkiiba pentose 0.05 ilaa 0.2 aqueous acid macdanta aqueous ee dareeraha qulqulka furaha ee ku shaqeeya heerkul u dhexeeya 220 ° C. ...
Waqtiga degenaanshaha falcelintu waa gaaban yahay wuxuuna u dhexeeyaa 0.5 ilaa 100 sekan. Hawl -wadeenka qulqulka qulqulka qulqulka sare ee aadka u sarreeya ayaa laga yaabaa in lagu hawlgeliyo qaabayn kasta si loo soo celiyo badeecada dhogorta. Laba qabanqaabo oo la doorbiday ayaa ah hal waji, qaliinka dib -u -warshadaynta pentose kaas oo furfural -ku ...
Keto-enol Tautomerism-ka Dibenzoylmethane ee Warbaahinta Abaabulan
Keto-enol Tautomerism-ka Dibenzoylmethane ee Warbaahinta Abaabulan Jiang, Yun-Bao ~* Ye, Nong (Waaxda Kimistariga, Jaamacadda Xiamen, Xiamen, 361005) Tautomerism-ka keto-enol ee dibenzoylmethane (DBM) ee warbaahinta abaabulan, tusaale β-cyclodextrin iyo micelles (ionic iyo non-ionic), waxaa la socday ultr ...
Saamaynta ka-hortagga dibenzoylmethane ee ka dhanka ah N, N-dimethylformamide-ku-kicinta hepatotoxicity daran ee jiirarka
AIM Si loo qiimeeyo suurtogalnimada dibenzoylmethane (DBM) ee ka hortagga iyo daaweynta N, N-dimethylformamide (DMF) sumoobo.METHODS Qaababka tijaabada xoolaha ee cagaarshowga oo ay sababtay DMF ayaa la dabaqay si loo baaro saamaynta ka-hortagga iyo ka-hortagga siday u kala horreeyaan. Tijaabada ka-hortagga, ...
Xarunta Kiimikada Furfural
Isku-darka kiimikada Furfural (C4H3O-CHO), oo sidoo kale loo yaqaan 2-furaldehyde, oo ah xubinta ugu caansan ee qoyska furan iyo ilaha kale ee farsamada muhiimka ah. Waa dareere aan midab lahayn (dhibicda karkarinta 161.7 ° C; cufnaanta gaarka ah 1.1598) ...
Waa Maxay Furfural? KC BRUNING Furfural waa kiimiko ka samaysan maaddo dabiici ah oo sida caadiga ah loo soo saaro ujeeddooyin warshadeed. Waxay asal ahaan ka kooban tahay waxsoosaarka beeraha sida buunshaha oat, bran, galleyda, iyo balka. Qaar ka mid ah p ...
Fiber Warshadda Bagasse
Melanoma oo aan la taaban karin ayaa u dhiganta kaliya 4% dhammaan kansarka maqaarka laakiin wuxuu ka mid yahay neoplasms -ka ugu halista badan. Dacarbazine waa dawada xulashada daaweynta melanoma ee Brazil iyada oo loo marayo nidaamka caafimaadka dadweynaha inta badan sababtoo ah qiimaheeda jaban. Si kastaba ha noqotee, waa alkyl ...